Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Florian Wirtz Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị bụ Florian Wirtz na-agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Ndụ Onwe na Net Net.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị na-atọ gị ụtọ na ọdịdị nke Florian Wirtz's Biography, lee ndụ nwata ya na mbili elu. I kwenye na m na achikota Bio ya.
Ihe omuma nke Florian Wirtz. Lee ndụ nwata ya na oke ịrị elu ya.
Akụkọ banyere nwata nwanyị Florian Wirtz:
Maka ndị na - ebido Biography, ọ na - aza aha - Flori na nke ọhụrụ Kai Havertz. Florian Richard Wirtz was born on the 3rd day of May 2003 to his mother, Karin Witz and father, Joachim Witz, in Pulheim, a city in Germany.
Onyinye German nke na-abịa abịa dị ka nwa nwoke na nwa nke abụọ, nke a mụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya na-ese onyinyo ebe a.
Zute nne na nna Florian Wirtz. Aha nna ya bụ Joachim Witz mgbe mama ya, Karin Witz.
A zụlitere Florian na nwanne ya nwanyị nke okenye Juliane - afọ abụọ ọ bụ okenye. Mụnne ha nọrọ na nwata na Brauweiler, nke bụ akụkụ nke obodo German nke Pulheim.
Ndị nne na nna Florian Wirtz zụlitere ya na nwanne ya nwanyị nke okenye, bụ Juliane.
Mgbe ọ na-akọwa nwanne ya nwoke, n'ihe gbasara mmekọrịta nwanne na nwanne ha jikọrọ, Juliane kwuru otu oge;
N’ụlọ, Flori ka bụ nwanne m nwoke nke na-akpasu m iwe mgbe ụfọdụ (ịchị ọchị). N'ọhịa, ọ ka bụ dike nye ọtụtụ ndị.
Ezigbo ezinụlọ Florian Wirtz:
N'ụlọ ndị German, onye ọ bụla bi ma kuo ume bọọlụ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, egwuregwu ahụ na-agba ọsọ na ha, ọ bụ ihe gbasara ezinụlọ maka Wirtz. Ndị nne na nna Florian Wirtz bụ ndị ọrụ bọọlụ na-eme ihe karịrị ijikwa ọrụ ya.
N'ezie, Florian Wirtz Dad, Joachim nwere ọrụ ọzọ dị ka onye isi oche nke SV Grün-Weiß Brauweiller. Nke a bụ ụlọ ọgbakọ dị na obodo ha - ebe ụmụ ya abụọ (Florian na Juliane) malitere ọrụ ha mara mma.
Nke ikpeazu bụ Juliane Wirtz - nwanne nwanyị nke okenye Florian. Ọ bụkwa ndị ịgba bọọlụ na-ede oge dị ka onye na-agbachitere ụmụ nwanyị Bayer 04 Leverkusen n'oge edere. Juliane - dịka nke 2021 - nwekwara atụmatụ maka ndị otu Germany U-19.
Agbanyeghị na amụrụ na Pulheim, ezinụlọ Florian Wirtz enweghị mgbọrọgwụ site na ya. Ha si Brauweiler, bụ obodo ha, nke bụ akụkụ nke Pulheim, ọdịda anyanwụ nke Cologne, North Rhine-Westphalia na Germany.
Florian Wirtz Mmụta:
Florian Wirtz Football Akụkọ:
Site na mmalite, Joachim na Karin nwere atụmatụ zuru oke maka ụmụ ha. Ijide ọnọdụ onye isi oche, SV Grün-Weiß Brauweiller (ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ bọọlụ) mere ka ndụ dịrị nna dị mfe nghọta. Ná mmalite, site na afọ 5, o debanyere ma Florian na nwanne ya nwanyị, Juliane n'ebe ọrụ ya.
Ndụ mbido na Grün-Weiß Brauweiler:
Florian Wirtz Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ya, Florian Wirtz malitere inweta mkpebi ahụ siri ike iji mee ka nrọ ya na-emezu egwuregwu ya mezuru. Ọhụụ nke ime ka ọ ghara ịga dị ka echiche efu. Nnukwu agụụ maka football mere ka ọ bụrụ ọrụ ya.
Na Florian Wirtz, FC Köln midfield enweghị ihe ọ bụla. Igwe kpakpando abughi ihe mgbaru ọsọ na oge ndi ozo, kamakwa obi uto ya na nchebe ya, ike na duels, mmalite ike, ngbanye ngwa ngwa na ntaneti di elu.
N'iji nọmba 10 jersey maka akụkụ ya, onye na-eto eto nwere echiche na-ewe iwe rụrụ ọrụ dị mkpa na ìgwè ndị U17 nke FC Köln na-emeri German Championship na 2019. A kpọrọ onye na-eto eto dị ike nke ukwuu dị ka onye ntorobịa German kachasị mma na akụkụ ọdịda anyanwụ nke mba ahụ.
Florian Wirtz (n'aka ekpe) na Jens Castrop (n'aka nri) na-eme otu n'ime mmeri ha ama ama - asọmpi German na 2019.
N'ime otu egwuregwu U17 ya na Disemba 2019, onye na-egwu egwu na-agba ọsọ site na ọkara ụzọ na 10-0 merie ndị iro ya, Wuppertal. Lelee vidiyo n'okpuru.
Nke ahụ gbara Florian Wirtz ka ọ bụrụ aha ụlọ ka klọb malitere ịgba ya gburugburu dị ka sharks maka mbinye aka ya. Egwuregwu ahụ ghọrọ egwuregwu ikpeazụ ya maka FC Köln.
Bayer Leverkusen rutere n'etiti klọb ndị bịara ịkpọ oku na Jenụwarị 2020. Mgbe ha nwesịrị nzukọ na nne na nna Florian Wirtz - gụnyere ịgagharị na akụrụngwa ha, nwa nwoke na-ebuso ọgụ na-eme njem gbagoro n'okporo ụzọ ahụ gaa BayArena.
Na-agbasa ndekọ German:
First, Florian Wirtz overtook Kai Havertz dị ka onye ọkpụkpọ kachasị nta nke Leverkusen ka ọ pụta ìhè na njikọ, mgbe ọ dị afọ 17 na 15 ụbọchị.
That goal made Wirtz the onye na-eto eto na-eto eto na Bundesliga akụkọ ihe mere eme. O mezuru na afọ 17 na 34 ụbọchị. Ihe ndekọ a ga-emesị gafere Youssoufa Moukoko (ọ dị afọ 16 na ụbọchị 28).
Onye bụ enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye Florian Wirtz:
Nke mbụ, akwụkwọ akụkọ Florian Wirtz Bundesliga gosipụtara na ọ bụ nwoke na-eme nke ọma na ịme ya. Na n’azụ ndị egwuregwu bọọlụ ọ bụla na-aga nke ọma, e kwesịrị inwe WAG ma ọ bụ enyi nwanyị mara mma.
Ekwuru eziokwu, ịgọnahụ na eziokwu ahụ bụ na Florian Wirtz na-amụmụ ọnụ ọchị yana ụdị egwuregwu ya agaghị adọta ụmụ nwanyị ndị chọrọ ịbụ enyi nwanyị ya, nne nke nwa ya ma ọ bụ nwunye ya.
N'ime eziokwu niile, ndị otu anyị nyochara ebe niile, ọ nweghị akara aka onye hụrụ Florian Wirtz n'anya. Ugbu a, Bayer Leverkusen Attacking midfielder nwere ike ịlụ onye na nzuzo. Ọ bụrụ ee, ọ ga-abụ oge tupu ozi gbasara ndụ onwe ya na-aga n'ihu ọha.
Ọnye na-bụ Florian Wirtz? … Pụọ n'ihe ndị ọ na-eme na pitch. Mata ihe omume nke German - n'èzí football ga-enyere gị aka ịghọta ya nke ọma.
Ihe mbu, Florian Wirtz bụ onye agụụ na-agụ mgbe niile maka agụmakwụkwọ ma ọ bụ ihe ọmụma. Ọ bụ onye nwere mmasị n'ịmụ ihe na nke a bụ isi ihe kpatara ị ga - ahụ ya na tebụl ọmụmụ ya ọbụlagodi na - eleta ya n'ụlọ ya.
Nke abuo n'ihe banyere agwa ya, Florian Wirtz yiri ka o bu onye nwe ulo. Ọ bụrụ na ịmaghị, nke a bụ okwu ejiri kọwaa onye ọ na-atọ ụtọ ịnọ n'ụlọ.
Ọ bụ ezie na nyocha nwere ya na ọ bụghị ụdị zuru oke, nke pụtara na anyị ahụla ya ka ọ na-eme nnukwu ihe n'èzí - dị ka a hụrụ na ngalaba na-esote nke Biography.
Ndụ Florian Wirtz:
N'oge ezumike ezumike, o yikarịrị ka ị gaghị ahụ German na ezinụlọ ya na-eme ọmụmụ ma ọ bụ zuru ike. O yikarịrị ka a ga-ahụ ya ka ọ na-eme ihe omume ntụrụndụ ya - Jet skiing. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Florian Wirtz na-ebi ndụ ibi ndụ na-atọ ụtọ n’elu mmiri na-aga ebe dị mma.
Ndụ ezinụlọ nke Florian Wirtz:
Banyere Nna Florian Wirtz:
Banyere mama mama Florian Wirtz:
Obi umeala na nkwanye ùgwù bụ àgwà abụọ dị mkpa nke na-agaghị efu efu. Anyị tinyere nke ahụ na akpụkpọ ụkwụ Florian na Juliane dị ka ihe ncheta. Ruo ugbu a, anyị enweghị nchegbu.
Banyere Nwanne Nwanyị Florian Wirtz:
Dị ka nwanne ya nwoke, Juliane Wirtz na-efekwa na agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba nke Bayer 04 Leverkusen ka m na ede Bio. Bụ onye a mụrụ na 22nd nke August 2001 na-egosi na ọ bụ 1 afọ, ọnwa 8 na ụbọchị 10 karịa Florian.
U-19 Vice European Championship 2019.
Eziokwu Florian Wirtz:
N'ịga njem site na Biography, anyị ga-eji akụkụ mmechi nke ihe ncheta anyị kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara nnukwu talent German football.
Eziokwu # 1 - Ha Na - Arụ Oyi:
Eziokwu # 2 - Florian Wirtz Salary Breakdown and Comparison:
Kemgbe ị bidoro ịgụ Florian Wirtz'Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Bayer.
Florian Wirtz Bayer Leverkusen Salary (na Euro - €)
Kwa Afọ: 781,200
Ọnwa kwa: 65,100
Kwa Izu: 15,000
Kwa :bọchị: 2,142
Oge Awa ọ bụla: 90
Nkeji ọ bụla: 1.4
Sekọnd ọ bụla: 0.02
You maara?… Nwa amaala German ga-arụ ọrụ maka afọ 18 na ọnwa 6 iji mee ka ụgwọ ọnwa Florian Wirtz na Bayer Leverkusen kwa afọ.
Eziokwu # 3 - Florian Wirtz FIFA nwere ike:
N'ihe banyere agha ndị dị n'etiti etiti ụwa na-eche banyere ọnọdụ ọrụ FIFA, ndị na-eto eto dị ka Florian Wirtz tinyere ndị America abụọ- Weston McKennie na Moisés Caicedo ga-ama jijiji. Ka anyị ghara ichefu, ndị German na-ekpuchi 17 n'oge ahụ ọ nwere ikike 89 FIFA.
Eziokwu # 4 - Florian Wirtz Religion:
Agbanyeghị, anyị chọpụtara na Florian bụ aha unisex a gbaziri site na aha Rom ochie - Florianus. Eziokwu ahụ bụ na ndị mụrụ ya (Joachim na Karin) na-aza aha Ndị Kraịst na-egosi na ọ ga-abụ na a mụrụ ya n'okpukpe ahụ.
The constant communication of values, a focus on closeness and a sheer determination to grow in the sport. This lifestyle is similar to that experienced by Thorgan na Eden Hazard.
N'ezie, o doro anya na Florian Wirtz bụ nnukwu ọbịbịa na-abịa abịa na bọọlụ German. Mgbe ụfọdụ anyị na-eche, ịzụlite ụmụaka bọọlụ na ijikwa ezinụlọ, ịghọ ndị ọrụ na ịgba ọsọ otu egwuregwu bọọlụ: Kedu ka ndị mụrụ ya (Karin na Joachim Witz) si ekekọrịta ibu?
Daalụ maka ịnọnyere anyị na Life Life nke Florian Wirtz, 17 afọ ụlọ akwụkwọ kọleji nke mepụtara oge pụrụ iche. Na Lifebogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ na ntinye aka anyị kwa ụbọchị iji wepụta akụkọ banyere Ndị egwuregwu bọọlụ German.
Jiri nwayọ rute anyị site na kọntaktị anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị mma na akụkọ ndụ Florian Wirtz. Tụkwasị na nke a, anyị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị mee ka anyị mara ihe ị chere gbasara 5 ụkwụ 9 sentimita asatọ German na-awakpo midfielder na ngalaba nkọwa. Maka nchịkọta ngwa ngwa nke ndị na-agba ọsọ ụkwụ, jiri tebụl anyị Wiki.
Florian Wirtz Wiki Enyocha
Aha n'uju: Florian Richard Wirtz
Aha otutu: Flori na onye ọhụrụ Kai Havertz
Ụbọchị ọmụmụ: Rdbọchị 3 nke Mee 2003
Age: 18 afọ na ọnwa 6.
Ebe amụrụ onye: Pulheim, Germany
Ndị nne na nna: Karin Witz (nne) na Joachim Witz (Nna)
Nwanne: Juliane Witz kwuru
Ọrụ Nna: Grün-Weiß Brauweiler Chairman na Football Nnọchiteanya
Ọrụ Mama: football Nnọchiteanya Ukwu
elu: 1.76 m (5 na 9 1⁄2 na)
Ihe akara Zodiac: Taurus
Ezigbo Net: 1 nde Euro (2021 stats)